गुठी विवादको चुरो कुरो, जागे उपत्यकाका नेवार - नेपालबहस
कोरोना भाइरस हावाबाट सर्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी
कोरोनाबाट विश्वमा पाँच लाख ३७ हजार भन्दा बढीको मृत्यु
बन्दाबन्दीका कारण ‘छ लेन’ सडक निर्माण कार्य सुस्त
निगमका ३ पाइलटसहित १४ कर्मचारीमा कोरोनाको पुष्टि
बर्षाले अस्तव्यस्त सडक : दर्जन घर जोखिममा, जनजीवन निकै त्रसित
बन्दाबन्दीमा बारअनुसारको टोल छुट्याएर शिक्षक परिचालन
गण्डकीमा थप १७ जनामा कोरोनाको पुष्टि, संक्रमितको संख्या १११३ पुग्यो
असार लागेदेखि कोरोना परीक्षण गराउने ह्वात्तै बढे
गृहपृष्ठ खोज/विशेष गुठी विवादको चुरो कुरो, जागे उपत्यकाका नेवार
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले आजको युगमा समेत काठले बनाएको रथ तान्ने गर्छ । भक्तपुरको बोडेका युवाले हरेक साल जिब्रो छेडेर पीडा लुकाउने गर्छन् ।
यी काम उनहरुले रहरले गरेका हैनन् , धर्म,संस्कार ,परम्परा र पहिचान धान्न गरिएको हो । लिच्छिवीकालदेखिको मौलिक परम्परा र पहिचानलाई जीवन्त राख्न निरन्तरता दिंदै आएको हो । उपत्यकाका नेवार समुदायको कुनै काम नभएर यसको निरन्तरतामा सक्रिय भएका होइनन् । भन्ने पनि गरिएको छ कि नेवारहरुले बर्षमा ३६६ दिन विभिन्न जात्रा, पर्व, मेला, पूजापाठ गर्ने गर्छन् । यो भनेको नेपालीपनको अलौकिक पहिचान हो, गौरव हो ।
हुन त धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिष्ट दर्शनले गर्दा पनि होला ओली सरकार गुठी सम्वन्धी नयाँ ऐन ल्याएर इशाईहरुका लागि उर्वर भूमि बनाउन अग्रसर भएको छ । त्यसैको पछिल्लो कडी बनेको छ – गुठीसम्वन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको छ । विधेयक पारित भयो भने नेपाल र नेपालीको धर्म , संस्कृति र परम्पराको वैधानिक रुपमै अवसान हुने छ ।
यति मात्र होइन, साकेला, चण्डी, झर्रा, कौरा, लाखे, हुड्केली, देउडा, सोरठी वा भैरव नाँचको नेपालमा बेग्लै परिचय र महत्व रहेको छ । सनातनदेखि यी परम्परा हामीले अंगालिरहेका छौं । यसैले हामीलाई नेपाल र नेपाली भनेर चिनाएको छ । पूर्वीय धर्म, परम्परा र संस्कृतिको बेजोड मेल छ नेपालमा । यही मौलिकता हेर्न र अनुभव गर्न विदेशी आउने गर्छन् । पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड नै हाम्रो मौलिक संस्कृति , धर्म र परम्परा हुन् । त्यसैले आजको २१ औं शताव्दीमा पनि यो जीवन्त छ , प्रभावकारी छ ।
तर दुःखको कुरा अहिलेको सरकार नेपाली मौलिक पहिचान झल्कने धर्म ,संस्कृति ,परम्परा, भाषा , भेषभुषा र पहिचानको समुल नष्ट गर्न लागिपरेको छ । किनकी सरकार नेपाली भन्दा विदेशीको चाहना पूरा गर्न चाहन्छ । नेपाली परम्परा , संस्कार र धर्म नाश गर्दा मात्र यहाँ इसाईहरुको बोलबाला हुने छ । त्यसैले हाम्रो मौलिकता पूर्णत ध्वस्त बनाउन आतुर छ ओली सरकार ।
नेपाली जनताले दुईतिहाई समर्थनका साथ विजयमाला पहिराएको ओली सरकार एकपछि अर्काे विवादास्पद निर्णय गर्न उद्यत् छ । हुन त धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिष्ट दर्शनले गर्दा पनि होला ओली सरकार गुठी सम्वन्धी नयाँ ऐन ल्याएर इशाईहरुका लागि उर्वर भूमि बनाउन अग्रसर भएको छ । त्यसैको पछिल्लो कडी बनेको छ – गुठीसम्वन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको छ । विधेयक पारित भयो भने नेपाल र नेपालीको धर्म , संस्कृति र परम्पराको वैधानिक रुपमै अवसान हुने छ ।
ओली सरकार धर्म निरपेक्षताको पक्षपोषण गर्ने नाममा झण्डै ८२ प्रतिशत हिन्दू बसोवास भएको नेपाललाई निरिह बनाउन लागिपरेको छ । नेकपा सम्वद्ध ठूला नेताहरु नेपालमा हिन्दू धर्म भन्दा इसाई धर्म प्रचारकको भूमिकामा सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैं होलीवाइनको नाइके हुन् । त्यसैले गर्दा विस्तारै नेपाललाई इसाईकरण गर्न ने क पा अघोषित रुपमा सल्बलाई रहेको छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा झण्डै २२ हजारको संख्यामा चर्च निर्माण भएका छन् । त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम ओली सरकारले गरिरहेको छ ।
के हो गुठी विवाद ?
गएको वैशाख १७ गते ओली सरकारले राष्ट्रियसभामा हालको गुठी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न गुठीसम्वन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । यो विधेयक पारित हुँदा देशैभरिका गुठियारहरुको सम्पूर्ण हक अधिकार समाप्त हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २३,२४ र ६० आपत्तिजनक रहेका छन् । गुठीलाई व्यवस्थित गर्न भनि ल्याउन खोजिएको यस विधेयकको दफा २३ ले गुठीको हक र दायित्व समाप्त गरी गुठी प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्ने छ । हाल कायम छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी अन्त्य गरी राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा हाल गुठियारमा अन्तरनिहित सबै हक अधिकार र दायित्व स्वत प्राधिकरणमा सर्ने छ । साथै हाल समुदाय मिलेर बनाइएका सबै गुठी स्वतः प्राधिकरणमा जाने भएको छन् । त्यसको सञ्चालन र रेखदेख सरकारले गर्ने अवस्था आउने छ । यस्तै व्यक्ति मोही भएको गुठीको जग्गा पनि उसैको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको रजार्इं हुने अवस्था आउने छ ।
दुई तिहाईको दम्भले नेपालीको मौलिक पहिचान मेटाउन सक्दैन । भोलि शनिवार बिहानै काठमाडौंका नेवार समुदायले वसन्तपुरमा विरोध जुलुुुस निकाल्दै छन् । सरकार विरुद्ध एकलाख मानिस सडकमा ओर्लियो भने हालत के होला ? उपत्यका भित्र प्रहरीको करिब १५ हजार जनशक्ति रहेको छ । लाखौं जनता सडकमा ओर्लिए भने विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता फुत्किएजस्तै ओली पनि घरका न घाटका हुने अवस्था आउन सक्छ ।
नेवार समुदायले आफ्नो मौलिक परम्परा , संस्कृति र पहिचान जोगाउन आफैं जागरुकता बढाएका छन् । जन्मदेखि मृत्यसम्मका संस्कारमा गुठीको अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्छ । तर यो विधेयक पारित भयो भने त्यो परम्परा र संस्कारमा सरकारी नियन्त्रण कायम हुने छ । जसले गर्दा मौलिक पहिचान नै मासिने छ । त्यसले फाइदा भनेको पश्चिमालाई पुग्ने हो । इशाईकरण गर्नका लागि यसले ठूलो बल प्रदान गर्ने छ ।
सरकारले यो विधेयक पारित गराउन प्रक्रिया थालेपछि जताततै विरोधका स्वर उठेका छन् । संसद्देखि सडकसम्म विरोध उर्लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसको विरोधमा संघीय संसद्का काम कारवाही अवरुद्ध गरेको छ । यस्तै गुठियारहरु सडक संर्घर्षका होमिएका छन् । हिजो विहीबार ललितपुरमा विधेयकको विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिएको जनसमुदायको अगाडि सरकार निरिह बनेको छ । दुई तिहाईको दम्भले नेपालीको मौलिक पहिचान मेटाउन सक्दैन । भोलि शनिवार बिहानै काठमाडौंका नेवार समुदायले वसन्तपुरमा विरोध जुलुुुस निकाल्दै छन् । सरकार विरुद्ध एकलाख मानिस सडकमा ओर्लियो भने हालत के होला ? उपत्यका भित्र प्रहरीको करिब १५ हजार जनशक्ति रहेको छ । लाखौं जनता सडकमा ओर्लिए भने विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता फुत्किएजस्तै ओली पनि घरका न घाटका हुने अवस्था आउन सक्छ ।
सामन्तवादको अर्थ पुँजीपति बर्गको पक्षधर । यसको मतलव राजधानीका सबै नेवार समुदाय चाहिं पुँजीपति हुन् । अरुलाई हेप्ने दवाउने नै सामन्तवादी हो । उनीहरुलाई तह लगाउन नै यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई रहेको छ । मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि गुठी पक्षधर नेवार समुदाय अझ आक्रोशित बनेको छ । यसले विवादलाई अझै मलजल गरेको छ । कहाँ कुन शव्दको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नभएका व्यक्तिलाई पदमा राखेपछि हुने टिप्पणी यस्तै हुन् ।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको बोली आपत्तिजनक
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भनेका छन् –नजरमा गुठी र गुठियार भनेको सामन्तवादको अवशेष हो । सामन्तवादको अर्थ पुँजीपति बर्गको पक्षधर । यसको मतलव राजधानीका सबै नेवार समुदाय चाहिं पुँजीपति हुन् । अरुलाई हेप्ने दवाउने नै सामन्तवादी हो । उनीहरुलाई तह लगाउन नै यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई रहेको छ । मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि गुठी पक्षधर नेवार समुदाय अझ आक्रोशित बनेको छ । यसले विवादलाई अझै मलजल गरेको छ । कहाँ कुन शव्दको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नभएका व्यक्तिलाई पदमा राखेपछि हुने टिप्पणी यस्तै हुन् ।
ने क पा हच्कियो
गुठी ऐन विवाद चरमचुलीमा पुग्ने अवस्था देखेपछि सत्ताधारीहरु हच्किएका छन् । ने क पा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड , पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि अरु नेता कार्यकर्तासमेत सरकारले सल्लाह नै नगरी विधेयक दर्ता गराएको भनिरहेका छन् । तर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कुनै औपचारिक छलफल भने भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली विदेशबाट पर्सी असार १ मा फर्केपछि यस’bout निर्णय हुने बताइएको छ । यस्तै यो विवादमा संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आइतवार छलफल हुने भएको छ ।
मन्त्री गोकुल बास्कोटा
अघिल्लो लेखभूमाफिया र ईसाई मिशनरीको जालोमा गुठी विधेयक
अर्को लेखकुमारी बैंकको अध्यक्षमा अमिरप्रताप राणा चयन
नेकपाभित्र चर्किने भो रडाको
नक्शा प्रकरण : नेकपामा जस लिने होड
ओलीको संकटमोचनको कथा
ओलीको नयाँ फण्डा
ओली र नेपाल पक्ष सहमतिको नजिक, प्रचण्ड र झलनाथ सशंकित
नेकपामा शीर्ष नेताको आ–आफ्नै स्वार्थ
शिक्षा / स्वास्थ्य1963
मेडिकल कलेज / अस्पताल1438
तस्वीर आफै बोल्छ376
स्कुल / कलेज358